कतार र जापान पनि कोपा अमेरिकामा सहभागिता जनाउँदैछन ! | JanaSammat.com
कतार र जापान पनि कोपा अमेरिकामा सहभागिता जनाउँदैछन !
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रका १० टोलीबाहेक अन्य देशलाई समेत ‘आगन्तुक टोली’ का रूपमा प्रतियोगितामा सहभागी गराउने गर्छ
पोखरा । सन् २०१९ मा हुने दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका हो ।
तर, आयोजकले विभिन्न समयमा सो क्षेत्रका १० टोलीबाहेक अन्य देशलाई समेत ‘आगन्तुक टोली’ का रूपमा प्रतियोगितामा सहभागी गराउने गर्छ । उसले विगतदेखि नै यस्तो गर्दै आइरहेको छ । जसबाट प्रतियोगितामा विभिन्न १२ देशहरुले सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।